सेट गरिएको फिल्टर शर्तहरू फिल्टर नेभिगेटर मा देखापर्छ। फिल्टर सेट गर्ना साथै,तपाईँले फिल्टर नेभिगेटर को पिंधमा एउटा खाली फिल्टर प्रविष्टि देख्नुहुन्छ। तपाईँले"Or" शव्द क्लिक गरेर यो प्रविष्टि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईँले खाली फिल्टर प्रविष्टि चयन गर्नुभएमा, तपाईँले फारममा थप फिल्टर शर्तहरू प्रविष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। यि शर्तहरू बुलियन OR बाट पहिलेनै परिभाषित गरिएको शर्तहरूमा लिङ्क गरिन्छन।
प्रसंग मेनु चाँहि फिल्टर नेभिगेटर मा भएको हरेक प्रविष्टिका लागि बोलाउन सकिन्छ। तपाईँले यो क्षेत्रमा फिल्टर शर्तहरू सिधै पाठको रूपमा सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एउटा फाँटमा सामग्री छ वा छैन भन्ने कुरा जाँच गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले फिल्टर शर्तहरू "खाली" (SQL:"शून्य छ") वा "खाली छैन" (SQL: "शून्य छैन") चयन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रसंग मेनु प्रयोग गरेर प्रविष्टि मेट्न सम्भव छ।
तपाईँको फारम डिजाइन, तपाईँले समनुरूप Properties संवादको Data ट्याबमा प्रत्येक पाठ बाकसका लागि "Filter proposal" गुण सेट गर्न सक्नुहुन्छ. फिल्टर मोडमा प्रशस्त खोजहरूमा, तपाईँले यी फाँटहरूमा समाहित सबै जानकारीबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ. स्वतपूरा प्रकार्य प्रयोग गरेर फाँट सामग्री चयन गर्न सकिन्छ. ख्याल राख्नुहोस, तथापि, कि यो प्रकार्यलाई स्मृति खाली स्थान र समयको ठूलो मात्रा आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी ठूलो डाटाबेसहरूमा प्रयोग गरिँदा र तसर्थ कहिलेकाहीँ प्रयोग गरिनुपर्दछ.